Abavelisi beHuawei ONU | Kwichina Ifektri ye-Huawei ONU kunye nabaxhasi
I-EchoLife HG8546M, isinxibelelanisi senethiwekhi esibonakalayo (i-ONT), sisango eliphezulu lesango lasekhaya kwisisombululo seHuawei FTTH. Ngokusebenzisa itekhnoloji ye-xPON, ukufikelela kububanzi be-Broadband kubonelelwa abasebenzisi bekhaya nabaseSOHO. I-H8546M ibonelela ngamachweba e-1 * e-POTS, 1 * GE + 3FE auto-adapting Ethernet port, kunye ne-2 * Wi-Fi port. I-H8546M inezinto eziphezulu zokuhambisa phambili ukuqinisekisa amava afanelekileyo ngeVoIP, i-Intanethi kunye neenkonzo zevidiyo ze-HD. Ke ngoko, i-H8546M ibonelela ngesisombululo sesiphelo kunye nenkxaso yexesha elizayo yokuxhasa ukuhanjiswa kwe-FTTH.
I-Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + CATV + IIPOTI + iWIFI EG8143A5
IHuawei EG8143A5 luhlobo lwendlela yokuGcina iOptical Network Terminal (i-ONT) -inxalenye yesisombululo sokufikelela seHuawei-esisebenzisa itekhnoloji yeGigabit-Passive Optical Network (GPON) ukuphumeza ukufikelela kubasebenzisi be-ultra-broadband. Ngokusebenza okuphezulu kokudlulisela phambili kuqinisekisa amava omsebenzisi angaguqukiyo kwilizwi, idatha, kunye neNkcazo ePhakamileyo (HD) yeenkonzo zevidiyo, kunye neenkonzo ezijolise kwikamva zenkxaso, i-EG8143A5 inceda amashishini ukuba akhe izisombululo zokufikelela kuzo zonke izinto ezithunyelwe kwiikhampasi zesizukulwana esilandelayo.
IHuawei GPON ONT 1GE HG8010H
I-Huawei HG8010H FTTH inethiwekhi yesiphelo senethiwekhi (ONT) sisiphelo sangaphakathi senethiwekhi yokujonga in isisombululo seHuawei FTTx. Ngokusebenzisa itekhnoloji ye-GPON, ukufikelela kububanzi be-Broadband kubonelelwa abasebenzisi bekhaya nabaseSOHO. Isango lasekhaya emva koko linokudityaniswa kwi-PC, iTheminali yeselfowuni, i-STB, okanye ifowuni yeVidiyo ukubonelela ngesantya esiphezulu sedatha, iinkonzo zevidiyo.
Le modeli ixhasa ujongano olunye lwe-GE Ethernet kwaye iqinisekisa ngokufanelekileyo idatha kunye namava enkonzo yevidiyo ye-HD ngokusebenza okuphezulu kokudlulisela phambili kwaye oku kubonelela abathengi ngesisombululo sokufikelela se-Optical kunye nenkxaso yeenkonzo ezijolise kwikamva.
IHuawei GPON ONT 4GE + 2POTS + WIFI HG8245H
I-Huawei HG8245H FTTH yenziwa kwaye yaphuhliswa yinkampani yeHuawei, eyinkokeli kwi-FTTH / FTTO ye-broadband access network field. Le modeli ilawulwa ngokufanelekileyo yongezwe ngezinto ezinjenge-bandwidth ephezulu, ukuthembeka okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nokwanelisa abasebenzisi abafunekayo ukufikelela kubanzi, ilizwi, idatha kunye nevidiyo njlnjl. Iinkonzo zevidiyo zeVoIP, Intanethi kunye neHD. Ke ngoko, i-HG8245H ibonelela ngesisombululo sesiphelo kunye nenkonzo ejolise kwikamva exhasa amandla okuhanjiswa kwe-FTTH.
I-Huawei HG8245H FTTH ibonelela ngamazibuko e-4GE + 2 * izibuko zefowuni kunye ne-wifi ene-eriyali ezi-2 zokufumana umsebenzi ongenazingcingo.
IHuawei GPON ONT 1GE HG8310M
I-Huawei HG8310M FTTH inethiwekhi yesiphelo senethiwekhi (ONT) sisiphelo sangaphakathi senethiwekhi yokujonga in isisombululo seHuawei FTTx. Ngokusebenzisa itekhnoloji ye-GPON, ukufikelela kububanzi be-Broadband kubonelelwa abasebenzisi bekhaya nabaseSOHO. Isango lasekhaya emva koko linokudityaniswa kwi-PC, iTheminali yeselfowuni, i-STB, okanye ifowuni yeVidiyo ukubonelela ngesantya esiphezulu sedatha, iinkonzo zevidiyo.
IHuawei GPON ONT 4GE + 1POT + 1USB + yeDual-Band WiFi HS8145V5
IHuawei HS8145V5 sisixhobo esifanelekileyo sokungena kwisisombululo segigabit fiber. Isicelo seFlexible, iplagi yenkxaso kunye nokudlala, ukuxilonga kude, ukugcina amandla okuhlaza kunye neminye imisebenzi. I-HS8145V5 ixhasa itekhnoloji ye-GPON, enokuqonda ukufikelela kububanzi be-broadband kubasebenzisi basekhaya kwiimeko zenethiwekhi ze-FTTH. Umsebenzi wawo wokuhambisa phambili ophezulu uqinisekisa amava enkonzo kwilizwi, idatha kunye nevidiyo eneenkcazo eziphezulu, kwaye ibonelela ngezisombululo ezifanelekileyo zokuphela kwexesha kunye nemisebenzi yenkxaso yeshishini elijolise kwikamva lokusasazwa kwe-FTTH.
IHuawei GPON ONT 1GE + 3FE + IIPOTI + iWIFI HS8545M5
I-Huawei HS8545M5 FTTH yindlela ephezulu yokungena ekhaya kwisisombululo se-FTTH. Ngokusebenzisa itekhnoloji ye-GPON, ukufikelela kububanzi be-Broadband kubonelelwa abasebenzisi bekhaya nabaseSOHO. IHuawei HS8545M5 FTTH inezinto eziphezulu zokuhambisa phambili ukuqinisekisa amava afanelekileyo ngeVoIP, i-Intanethi kunye neenkonzo zevidiyo ze-HD. I-Huawei HS8545M5 FTTH inika isisombululo esigqibeleleyo kunye nenkonzo ejolise kwikamva exhasa amandla okuhanjiswa kwe-FTTH.
I-EchoLife HG series Optical Network Terminals (ONTs) zizixhobo ezisecaleni lomsebenzisi kwizisombululo zeHuawei Fibre-To-The-House (FTTH) kunye nenkxaso yokufikelela kububanzi bebhendwndthithi yabasebenzisi beKhaya okanye yeOfisi eNcinci / yeOfisi yaseKhaya (i-SOHO) basebenzisa itekhnoloji yeXPON.
I-EchoLife HG uthotho lwee-ONT zibonelela ngamazibuko e-POTS kunye ne-FE / GE yokuxoxisana ngokuzenzekelayo ngamazibuko e-Ethernet, evumela ukusebenza kokusebenza okuphezulu. Ukuphucula iinkonzo zobungqina bexesha elizayo ngeHuawei EchoLife HG uthotho lwee-ONT, ezibandakanya iindidi ezintathu eziphambili: uhlobo lokuvala, ibhulorho + uhlobo lwelizwi, kunye nohlobo lwesango.
I-Sfp C ++, Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp, Ixabiso leHuawei Olt, IHuawei Qsfp +,